Meherado Badan oo ku yaal Magaalada Boosaaso oo Xirey.
Wararka ka imaanaya Magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegaya in meherado badan oo laga cunteyn jirey albaabada la iskugu laabtey waxaana loo aaneynaaa in loo xirey meheradahaasi kadib markii safirka doolarka uu meeshii ugu sareysey gaarey maciishadiina ay gaartey meel aan la goyn karin.
Mulkiilayaasha meheradaasi qaarkood oo aan la kulmey ayaa iiga sheekeeyay sababaha ay u xireen meheradoohada waxa uuna mid ka mid ah mulkiilayaasha meheradaasi oo lagu magaaabo Faarax Maxamed Daabax uu ii sheegey in ay u xireen sababo la xiriir maciishadii oo gaartey halkii ugu sareysey oo aanan wax ka goyn.
Si kastaba ahaatee waxaa loo aaneynayaa xirida meheradasi iskood isku xirey in ay ku qaaliyoobeen dhamaan cuntooyinkii ay gadi jireen sidaas dateedna ay u xireen mulkiilayaashu meheradooda.
Isku soo wada duuboo waayadii ugu danbeeyay ayaa waxaa sare usii kacayay sarifka doolarka lacaga qalaad ee magaalada boosaaso lagu kala sarifto oo gaarey heerkii ugu sareeyey ee uusab abid gaarin sidaasi darteedna ay maciishadii hawada u kacdey.
Yusuf Maxamed Ismail